Jamaica Blitz na ahịa zuru ụwa ọnụ: Mmelite gọọmentị sitere n'aka Minista njem nlegharị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica Blitz na ahịa zuru ụwa ọnụ: Mmelite gọọmentị sitere n'aka Minista njem nlegharị anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, gosipụtara mmelite na ngalaba njem n'ihu nzuko omeiwu. Ihe ndị a bụ okwu ya.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Jamaica na-eji nwayọọ nwayọọ na-alọghachi n'ụzọ dị ukwuu na ọchịchọ maka ngwaahịa anyị echegharịrị na-adị elu oge niile.
Ọ dịghị ebe ọ bụla nke a pụtara ìhè karịa n'ahịa ahịa anyị nwere nnukwu ihe ịga nke ọma nke izu ise nke butere anyị site na United States na Canada gaa Middle East na United Kingdom.
Nzaghachi a pụrụ iche n'ezie.
Ọ pụtapụtalarị na ọnụọgụ ahụ na ụzọ ọhụrụ anyị si enye onyinye nlegharị anya anyị, nke amụrụ site na echiche ọrịa COVID-19, na-akwụ ụgwọ. Ọnụ ọgụgụ ndị bịarutere anyị na-arị elu, ụgbọ elu maka oge oyi na-adị mma, ụgbọ mmiri ga-alaghachikwa n'ọdụ ụgbọ mmiri anyị niile tupu afọ agwụ.
Ndị na-abata n'afọ ruo ugbu a na-eguzo na nde 1.2, na ebe ọ bụ na mbufe ụgbọ mmiri maliteghachiri n'August, anyị anabatala ihe karịrị ndị njem ụgbọ mmiri 36,000, ebe ego anyị na-enweta dị ugbu a na US $ 1.5 ijeri.
Jamaica dị mma na ụzọ mgbake ya. A na-eche na ndị mbata na-akwụsị 2021 ruru 41% karịa afọ, na afọ ruo taa, anyị enwetaghachila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke azụmaahịa nkwụsị 2019.
Ozi ọma ahụ bụ na Disemba na-abụkarị ọnwa siri ike maka anyị, ọ na-amalitekwa oge dị elu mgbe ọnụego dị elu, yabụ anyị ga-ezute amụma anyị nke ndị ọbịa nde 1.6 na ihe karịrị ijeri US $ 2 na enwetara.
Ka ọ na-erule njedebe nke 2022, a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa nke Jamaica ga-agbakọta nde 3.2, yana ndị njem n'ụgbọ mmiri ruru nde 1.1 yana ndị bịarutere na-akwụsị ihe ruru nde 2.1, ebe a na-atụkwa anya inweta ego na ijeri US $ 3.3.
Ka ọ na-erule njedebe nke 2023, a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa nke Jamaica ga-agbakọta nde 4.1, ebe ndị njem ụgbọ mmiri ruru nde 1.6 na ndị na-abịakwute ya ruru nde 2.5 na ego na-enweta na ijeri US $ 4.2.
Ka ọ na-erule njedebe nke 2024, a na-atụ anya na anyị ga-aka ọnụ ọgụgụ ndị butere ọrịa na-efe efe na ngụkọta ndị ọbịa bịara dị nde 4.5 yana atụmatụ na ha ga-enweta ego mgbanwe ego mba ofesi ruru ijeri US $4.7.
Akụkọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mma nke na-egosipụta mgbake a siri ike maka njem nlegharị anya:
Pasent 90 nke ọrụ itinye ego tupu ọrịa ọgbaghara agbasa ka dị.
Ihe karịrị ọrụ mmepe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-aga n'ihu.
Ime ụlọ 5,000 ọzọ.
Mmepe na-aga n'ihu na mpaghara dị iche iche nke agwaetiti ahụ.
Nlaghachi nke ọrụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri niile nke agwaetiti ahụ na mbido Disemba
N'imetụ aka na mbufe ụgbọ mmiri, na-esochi nkwụsị ọnwa 20 dị nso, Falmouth nabatara ụgbọ mmiri mbụ ya na Sọnde - Emerald Princess nke Carnival, ya na ndị njem 2,780 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri.
Celebrity Equinox, Aida Diva na Crystal Serenity na-atụ anya ịlaghachi na Falmouth ma emechaa n'ọnwa a. Ụgbọ mmiri flagship Disney Cruise Lines Disney Fantasy na-eme atụmatụ ileta na Disemba.
Ọbịbịa nke Emerald Princess nyere ohere maka mmalite dị nro nke Artisan Village na Hampden Wharf na ndị ọrụ 10. Ndị ọbịa njem ụgbọ mmiri nabatara ya nke ọma. Ego $700-million Tourism Enhancement Fund (TEF) - obodo enwetara ego bụ isiokwu ịkọ akụkọ Falmouth ma nye ndị Jamaica na ndị ọbịa ohere ịkọrọ nri, ihe ọṅụṅụ, nka, nka na omenala obodo.
Ọ bụ akụkụ nke nnukwu ọrụ mmepe Hampden Wharf ma bụrụ nke mbụ n'ime usoro Artisan Village nke ga-abụ na mpaghara ntụrụndụ n'ofe agwaetiti ahụ.
Nsonaazụ na-aga nke ọma nke ahịa ahịa mba ụwa blitz ga-enyere anyị aka iru ebumnuche a ma ọ bụrụ na ọ gafere ya.
Ekwere m ihe a ezigbo nlọghachi na mmụba na-achọ Brand Jamaica bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi mbọ anyị na-aga nke ọma na iweghachi ntụkwasị obi ndị njem na Destination Jamaica.
Usoro ahụike na nchekwa anyị, Resilient Corridors, Jamaica Cares, na ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi dị elu (ihe dị ka 60%) n'etiti ndị ọrụ njem anyị na-emesi ndị ọbịa anyị obi ike na ha nwere ahụmịhe ezumike dị mma, nchekwa na enweghị nkebi.
Ọ ga-amasị m ịkọrọ ụfọdụ isi ihe si na njem m mere n'oge na-adịbeghị anya, yana ndị isi ndị ọrụ njem nlegharị anya ndị ọzọ, gaa n'ahịa ahịa anyị bụ isi yana ntinye anyị na-abanye n'ahịa na-abụghị omenala nke Middle East, ebe anyị chọrọ ịkwalite mbata na mbata. kwalite n'ihu itinye ego na ngalaba njem nlegharị anya.
Anyị ji usoro nzukọ anyị na ndị isi ụlọ ọrụ njem, mgbasa ozi na ndị ọzọ metụtara na ahịa isi iyi abụọ kachasị ukwuu, United States na Canada malite blitz. Enwere m obi ụtọ ịkọrọ na njikọ anyị na ndị mmekọ njem nlegharị anya n'ahịa abụọ ahụ bara ezigbo uru.
Enwere nchegbu metụtara COVID-19 na anyị chọrọ ime ka obi sie mmasị njem nlegharị anya na Jamaica ka bụ ebe nchekwa.
Usoro iwu anyị dị iji hụ na ndị ọbịa nwere ike ịbịa n'agwaetiti ahụ, gaa na ebe nkiri anyị wee nwee ahụmịhe Jamaican n'enweghị nsogbu na enweghị nsogbu. Agbanyeghị, n'agbanyeghị nchegbu ndị a, ntụkwasị obi na Jamaica ka siri ike.
Ndị isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu kacha ibu n'ụwa, American Airlines, mesiri anyị obi ike na ka ọ na-erule Disemba n'agwaetiti ahụ ga-ahụ ụgbọ elu 17 na-akwụsịghị akwụsị kwa ụbọchị, n'ihi na a na-achọ ebe ọ ga-aga.
Ha kọwakwara na Jamaica tolitere na Caribbean n'etiti ndị na-azụ ahịa n'elu ikpo okwu American Airlines Vacations na-agbasa ma kwenye na ha ga-eji ụgbọ elu Boeing 787 ọhụrụ ha, buru ibu, n'ọtụtụ ụzọ isi na-aga Jamaica malite na Nọvemba.
Ụgbọ elu Southwest, otu n'ime ụgbọ elu kachasị na United States na ụgbọ elu ụgbọ elu kachasị ọnụ ala, mesiri ndị nnọchiteanya anyị obi ike na ụgbọ elu ha na-arụ ọrụ na Montego Bay n'ọnwa ndị na-abịa dị nso na ọkwa 2019 tupu ọrịa oria ojoo, na-egosi mmụba na-achọsi ike. maka njem Jamaica site na ndị njem US.
Ndịda ọdịda anyanwụ na-arụ ụgbọ elu na-adịghị akwụsị akwụsị n'etiti ọdụ ụgbọ elu mba ụwa US nke Houston (Hobby), Fort Lauderdale, Baltimore, Washington, Orlando, Chicago (Midway), St. Louis na Montego Bay.
Expedia Inc., ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem n'ịntanetị kachasị ukwuu n'ụwa na onye na-emepụta azụmahịa njem nlegharị anya maka Jamaica, kwuru na data ha na-egosi n'ụzọ doro anya na-adọrọ mmasị ọnụ ụlọ n'abalị na ndị njem na-eto eto na metrics abụọ karịrị otu oge na 2019. Ha kwukwara na US na-anọgide. ahịa mmalite ọchụchọ kacha elu maka Jamaica.
Ahịa isi iyi nke abụọ kachasị ukwuu, Canada, ga-ebuga ụgbọ elu 50 na-akwụsịghị akwụsị kwa izu n'agwaetiti ahụ. Ụgbọ elu ndị ahụ malitere na Nọvemba 1, Air Canada, WestJet, Sunwing, Swoop na Transat ga-eji ọrụ kpọmkwem sitere na obodo Canada Toronto, Montreal, Calgary, Winnipeg, Hamilton, Halifax, Edmonton, St. John's, Ottawa, na Moncton.
Ntinye akwụkwọ na-aga n'ihu na-agbagharị gburugburu 65% nke ọkwa 2019 na ụgbọ elu maka oge oyi dị na gburugburu 82% nke ọkwa 2019 na gburugburu oche 260,000 akpọchiri. ruo ọtụtụ ọnwa mechie njem mba ofesi.
Ebe Royal Caribbean International, ụgbọ mmiri nke abụọ kacha ibu n'ụwa, maliteghachiri ọrụ na Jamaica na Nọvemba nke afọ a. Ọzọkwa, ndị isi ụgbọ mmiri kwughachiri ọchịchọ siri ike iji puku kwuru puku ndị Jamaica were n'ọrụ n'ọtụtụ ọrụ ma na-eche mmezigharị iwu gọọmentị iji mee ka ọ bụrụ eziokwu.
Ntinye ego ga-ekere oke mkpa na mgbake njem nlegharị anya site n'inye ego dị mkpa iji wuo na kwalite ọrụ dị mkpa maka mmepe na uto nke ikike njem nlegharị anya.
Nleta anyị na Middle East nyere anyị ohere ịchọpụta ohere maka FDI na mpaghara njem anyị yana wulite mkparịta ụka malitere na June na Minista nke njem nlegharị anya maka Saudi Arabia, His Excellence Ahmed Al Khateeb, iji kwado nkwado na itinye ego na njem nlegharị anya. mpaghara isi ndị ọzọ.
Nkwụsị mbụ anyị bụ na United Arab Emirates (UAE) na Dubai World Expo 2020. A na-egosi Jamaica na ọmarịcha ụlọ ngosi ihe ngosi ebe ngwaahịa na ihe ọhụrụ dị ọhụrụ n'okpuru isiokwu: "Jamaica na-eme ka ọ gaa." Pavilion ahụ nwere mpaghara asaa, nke na-enye ndị ọbịa ohere ịhụ nlegharị anya, ụda na mmasị nke Jamaica, wee hụ ka obodo anyị si emegharị ụwa ma na-eje ozi dị ka njikọ logistical.
Obi dị m ụtọ ịkọrọ na akpọrọ pavilion anyị na-adọrọ adọrọ otu n'ime 'kachasị mma' na World Expo 2020 site n'aka ndị enyemaka ITP Media Group, Time Out Dubai.
Njem Dubai nyere anyị ohere ịgbaso mkparịta ụka anyị na ndị isi ụlọ ọrụ si TUI, otu n'ime ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ndị mmekọ na ngalaba nkesa nke ụlọ ọrụ njem.
TUI kwadoro ịmaliteghachi ụgbọ elu ha na njem ụgbọ mmiri na Jamaica, yana ọrụ ụgbọ mmiri na-eme atụmatụ ịmalite na Jenụwarị 2022. Ụlọ ọrụ ahụ akọwapụtara kpọmkwem atụmatụ maka ibubata ụlọ na Montego Bay na nsonye nke oku na Port Royal na oge njem ụgbọ mmiri ha. Anyị na-atụ anya ịnweta oku ise site na Jenụwarị ruo Eprel 2022 na Port Royal. N'oge mkparịta ụka na TUI, ndị isi ụlọ ọrụ ahụ dụrụ ọdụ na data ha na-egosi na ọchịchọ maka njem ụgbọ mmiri dị elu, na ha jisiri ike na-edobe akwụkwọ ndị akagbuola. Ha kesara na ikike ikuku maka oge oyi a ga-abụ 79,000, nke bụ naanị 9% na-erughị ọnụ ọgụgụ oyi tupu COVID.
Mgbe anyị nọ na Dubai, anyị na DP World, bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu n'ụwa na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, dabere na UAE, mechie usoro dị mkpa nke itinye ego n'ụgbọ mmiri. N'ime ụbọchị atọ n'usoro nke nzukọ, anyị nwere mkparịta ụka siri ike gbasara itinye ego na Port Royal Cruise Port na ohere nke ibubata ụlọ. Anyị tụlekwara maka mmepe nke ọdụ ngwa ngwa, ụgbọ njem ọtụtụ ụdị Vernamfield na aerotropolis yana itinye ego akụrụngwa ndị ọzọ.
DP World bụ ọkachamara na ngwa ngwa ibu, ọrụ ụgbọ mmiri, ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri na mpaghara azụmaahịa efu. Ọ na-ejikwa ihe dị ka nde 70 nde nke ihe dị ka ụgbọ mmiri 70,000 na-ebubata kwa afọ, nke ruru ihe dị ka 10% nke okporo ụzọ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ sitere na ọdụ ụgbọ mmiri 82 na ọdụ mmiri dị na mba 40.
Anyị malitere mkparịta ụka na ndị nnọchiteanya kachasị elu nke Emirates Airlines, iji webata ọrụ pụrụ iche n'etiti Dubai na Jamaica, na ememe nke Jamaica Day na Expo 2020, Dubai na February 2022. Emirates bụ ụgbọ elu kasị ukwuu na UAE, na Middle East n'ozuzu, na-arụ ọrụ. karịa ụgbọ elu 3,600 kwa izu.
Na mgbakwunye, anyị na-atụ anya nkwurita okwu n'ihu n'okwu gbasara atụmatụ ọtụtụ ebe a na-emepụta na ugwu Caribbean iji mee ka njikọ aka zuru oke nke Emirates na ndị mmekọ ndị ọzọ na Middle East.
Anyị na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke UAE zutekwara ka anyị kparịta imekọ ihe ọnụ na itinye ego na njem nlegharị anya site na mpaghara, atụmatụ njem nlegharị anya Middle East, na ụzọ ụzọ maka North Africa na Eshia na ịkwado ụgbọ elu.
Tụkwasị na nke ahụ, nzukọ mere na ndị isi nke EMAAR, nke a na-ekwu na ọ bụ onye ọbịa nke kasị ukwuu na nke a ma ama na Real Estate/Community Development na Middle East; DNATA, otu onye ọrụ njem nlegharị anya kachasị na UAE na TRACT, onye ọrụ njem nlegharị anya dị ike na India.
Njem anyị na UAE kwụsịrị na nnukwu ọkwa. Emere mmemme nturu ugo nke World Travel Awards nke afọ a na Dubai, na Jamaica gara n'ihu n'ịchịkọta ikike ya "Ebe ụzọ isi njem nke Caribbean' na 'ebe njem njem nke Caribbean,' ebe a na-akpọ ndị njem nlegharị anya Jamaica 'Boọdụ ndị njem nlegharị anya nke Caribbean.'
Anyị nwekwara mmeri n'ụdị ọhụrụ abụọ: 'Ebe njem nlegharị anya nlegharị anya nke Caribbean' na 'Ebe Anya Nature Nature nke Caribbean.' Ọtụtụ ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya mpaghara pụtakwara dị ka nnukwu mmeri.
Site na UAE, anyị gawara Riyadh, Saudi Arabia, ebe anyị na ndị isi ụgbọ elu Saudia nwere mkparịta ụka. Enwere m obi ụtọ ịkọrọ na atụmatụ ahụ dị na ụgbọ oloko iji kwalite njikọ ikuku n'etiti Middle East na Caribbean.
Atụmatụ sara mbara bụ ime Jamaica ka ọ bụrụ ebe njikọ sitere na Middle East ruo na Caribbean, Central America, South America na mpaghara North America. Nke a ga-edobe Jamaica dị ka isi na njikọta ikuku n'etiti East na West.
Obi siri anyị ike na anyị ga-ahụ nsonaazụ sitere na nke a na nkenke dị ka ụgbọ elu abụọ ahụ anyị kwurula gosipụtara agụụ siri ike maka Caribbean na, karịa, Latin America.
Agba nke omume ahịa na ndị isi njem nlegharị anya na ndị mmekọ ngwa agha na Middle East na-amị mkpụrụ nke ukwuu, ihe ịrụ ụka adịghịkwa ya na ọ ga-ebute n'ichebe itinye ego na ahịa ọhụrụ na imeghe ọnụ ụzọ ámá.
Ntụgharị anyị na-abanye n'ahịa isi mmalite nke atọ, United Kingdom (UK), iji kwado ndị bịarutere na-arụpụta ihe ma kwubie ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ blitz.
M duuru otu ndị nọ n’ọkwa dị elu sitere na Ministry of Tourism na Jamaica Tourist Board (JTB) gaa World Travel Market, bụ́ otu n’ime ihe ngosi azụmahịa njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ kasị ukwuu n’ụwa, bụ́ nke e mere na London malite na November 1 ruo 3.
Anyị na ndị mmekọ anyị bụ isi na UK enweela ezigbo mmekọrịta ma mesie ha obi ike maka njikere Jamaica dị maka ha yana nchekwa anyị dị ka ebe njem, yana ọnụọgụ ọrịa COVID-19 na-erughị otu pasent na Resilient Corridors.
Mgbe anyị nọ n'ahịa njem njem ụwa, anyị zutere ndị isi ọrụ Amadeus, ụlọ ọrụ teknụzụ njem zuru ụwa ọnụ nke Europe, onye gwara anyị na mwepụta Septemba 30 nke ihe nkiri James Bond kacha ọhụrụ, Ọ dịghị Oge ịnwụ, nke nwere ọtụtụ ihe nkiri gbara na ya. Jamaica, na-enyere aka n'ịkwaba mmasị n'ebe Jamaica na-aga, karịsịa na United Kingdom.
Jamaica bụ ebe obibi nke mmụọ Bond, ebe Ian Fleming na-ede akwụkwọ akụkọ Bond n'ụlọ ya, "Goldeye." Ihe nkiri Bond Dr. No na Live na Let Die ka e mekwara ihe nkiri ebe a. Maka oge ọ bụla ịnwụ anwụ, ndị na-ese ihe nkiri rụrụ ụlọ ezumike nka Bond na San San Beach na Port Antonio.
Ihe nkiri ndị ọzọ emere na Jamaica gụnyere nnọkọ ya na enyi ya Felix na izute 007 ọhụrụ, Nomi. Jamaica na-ejikwa okpukpu abụọ maka ihe nkiri Cuba dị na mpụta.
Na mgbakwunye, ndị isi Amadeus kwuru na ha na-ahụ nnukwu ọchụchọ na ntinye mmasị na ọchịchọ maka ebe Jamaica na United Kingdom wee kwuo na ọ bụ ọrụ Ministry of Tourism na ọha ya bụ Jamaica Tourist Board (JTB) nwere igodo. ndị mmekọ n'ahịa.
Mgbe ọnwa a gasịrị, anyị ga-amalite ịnata opekata mpe ụgbọ elu 17 kwa izu site na United Kingdom, na-eweghachi agwaetiti ahụ azụ ihe dịka 100 ikike oche ụgbọ elu ka ọnụọgụ njem anyị na-alaghachi.
TUI, British Airways na Virgin Atlantic bụ ụgbọ elu atọ na-ebu ndị njem n'etiti UK na Jamaica na TUI na-arụ ụgbọ elu isii kwa izu, Virgin Atlantic na-abawanye ụgbọ elu ise kwa izu yana British Airways na-arụ ọrụ ise kwa izu. Ụgbọ elu ndị a na-akwụsị na London Heathrow, London Gatwick, Manchester na Birmingham. E wezụga nke ahụ, anyị nwere ike ịhụ mgbanwe nhazi oge ọzọ ka ndị otu anyị na-aga n'ihu na mkparịta ụka anyị na ndị na-emetụta anyị.
Na akụkọ sitere na ahịa ndị Europe anyị, ụgbọ elu nke atọ kachasị na Europe, Eurowings, mere ụgbọ elu mbụ ya na Frankfurt, Germany, gaa Montego Bay na Nọvemba 4, ya na ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri 211.
Germany abụrụla anyị ahịa siri ike, ebe ndị ọbịa 23,000 si obodo a na-abịa n'ikpere mmiri anyị na 2019 tupu ọrịa a. Ụgbọ elu a na-esi na Germany ga-enyere aka n'ozi anyị ime ka ndị ọbịa si Europe bịa, nke ndị otu m na-arụsi ọrụ ike.
Ọrụ ọhụrụ a ga-efe efe ugboro abụọ kwa izu na Montego Bay, na-apụ na Wednesde na Satọde, wee kwalite ohere ịbanye n'àgwàetiti ahụ site na Europe. Na mgbakwunye, ụgbọ elu njem ntụrụndụ Switzerland, Edelweiss, malitere ụgbọ elu ọhụrụ na-eme kwa izu na Jamaica ebe Condor ụgbọ elu maliteghachiri ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu n'etiti Frankfurt, Germany na Montego Bay na Julaị.
Obi abụọ adịghị ya na njem nlegharị anya bụ obi mgbawa nke akụ na ụba Jamaica na ihe na-eme ka anyị nwee ike ịgbake ngwa ngwa. Uru ndị a a na-ahụ anya nke anyị na-enweta na njem nlegharị anya ga-agbakerịrị n'ezie maka abamuru nke ndị niile metụtara - ndị Jamaica, ndị mmekọ njem anyị na ndị ọbịa anyị.